Yaa lagu jeesteyndonaa galabta jaalayaasha Horseed mise jamaahiirta Heegan ?
Thursday, January 24th, 2019 - 09:57:59
Monday January 01, 2018 - 12:13:27 in Wararka by Hussein Hadafow
Kooxaha sida weyn u xifaaltama ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Horseed iyo naadiga ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee Heegan ayaa galabta ku ballansan garoonka Wiish ee Degmada C/casiis ee Gobalka Banaadir ciyaar ka tirsan horyaalka kubadda Gacanta Soomaaliya.
Kulankaan oo ah kulankii ciidamada ama ladhihi karo kulanka Qaranka maadaama labada naadi ay matalaan ciidamada qaranka somaaliyaayaa waxaa isku arki doona ciidanka xooga dalka iyo ciidanka booliska soomaaliyeed.
Ciyaartaan ayaa ah ciyaarta ugu adag ee laga ciyaaro gudaha dalka maadadama labada naadi ay matalaan ciidamada dalka malatariga iyo booliska soomaaliyeed.
Kulankaan oo ah kulanka ugu danbeeya wajiga hore ee horyaalka kubadda gacanta wiilasha Heerkiisa 1 aad ayaa lugu go'aamin doonaa hogaamiya yaasha wareegga kowaad ee horyaalka xilli sanadkaan uu yahay horyaalka mid aad u xamaasad badan.
Naadiga ciidanka booliska soomaaliyeed Heegan ayaa kulankeedii ugu danbeeyay ee ay ka ciyaartay horyaalka kubada gacanta kaga soo adkaatay naadiga Dekadda sad gaaraaya 32 -30.
Halka naadiga jaalayaasha ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed horseed kulankoodii ugu danbeeyay ay ka soo adkaadeen naadiga Dekada oo sanadkaan jawiga uu ka wareersanyahay waxeyna kaga soo adkaadeen goolal gaaraaya 23 - 28.
Heegan iyo horseed ayaa min 12 dhibcood ku hogaaminaya horyaalka kubada gacanta halka booska sadaxaad ay fadhdo Naadiga dekadda oo sanadkii hore ku guuleysatay horyaalka kubadda gacanta soomaaliya.
Ugu danbeen Cayaarta ugu adag ee horyaalka kubadda gacanta ayuu waxuu dhaxmaridonaa
Horseed VS Heegan
Garoonka: Stadium wiish
Taariikhda: 01 janaayo 2018
Waqtiga: 4:00 galabnimo
W/Q C/qaadir muse Nani Reer kaambo